छक्का पञ्जा हेरेपछि निर्देशकलाई मेरो प्रश्न– ट्रेलरमा देखाइएका संवाद कता लानुभयो ? - Namaste Post
छक्का पञ्जा हेरेपछि निर्देशकलाई मेरो प्रश्न– ट्रेलरमा देखाइएका संवाद कता लानुभयो ?
नमस्ते पोस्ट २०७३, २७ भाद्र सोमबार १२:०० 0
चलचित्र हेर्नुको औचित्य के हो ? मनोरञ्जनका लागि वा सन्देशका लागि ? यो भन्दा महत्वपूर्ण चलचित्र हेर्नेलाई भन्दापनि चलचित्र निर्माण गर्नेमाथि यो प्रश्न उठ्छ । यो औचित्यको सवाल चलचित्र छक्का पञ्जाको हो । सतहभन्दा अल्लि माथि उक्लिएर हेर्दा दिपकराज गिरी, शिवहरी पौडेल, जितु नेपाल, बुद्धि तामाङ, प्रियंका कार्की, नामै काफी छन् । तर चलचित्रमा नामभन्दा काम काफि हुने समयमा गिरीले गिरीकै, पौडेलले पौडेलकै नाम बेच्नु एक पटक पकाएको खाना एक महिनासम्म पु¥याएर खानु जस्तै हो ।
बैदेशिक रोजगारी भनिएपनि कथाले हाँस्य रोजगारी भने राम्रैसंग देखाएको छ । चलचित्र हेर्दा यस्तो लाग्छ की निर्माण युनिटले बैदेशिक रोजगारजस्तो संवेदनशील विषयलाई हावादारी बनाइदिएको छ । सतही र सामान्य रुपमा वैदेशिक रोजगारीलाई लिइनुमा नै फिल्म चिप्लिएको छ । चलचित्र हेर्दा यस्तो लाग्छ की बैदेशिक रोजगारीमा जानु भनेको कुनै कलाकार ३५ mm को क्यामरा फ्रेमबाट फ्रेम आउट हुनुजस्तै हो ।
कथाकै कुरा गर्दा मुख्य भुमिकामा देखिने गिरी एन्टागोनिस्ट हुन् वा प्रोटागोनिस्ट हुन् ? विदेशिएका श्रीमानका श्रीमतिको ओछ्यानमा बसेर, ‘तिर्खा लाग्दा कुवामा गएर पानी खाने हो, कुवामा हामफाल्ने होइन’ भन्ने चरित्र सकारात्मक कि नकारात्मक ? चलचित्र लेखक युनिटले गिरी जी चलचित्रका राजालाई राजैजस्तो लेखिदिए ता कि कार्यकर्तालाई गणतन्त्रको आन्दोलनमा राजधानी पठाएर भित्रैभित्रै निरंकुशता चलाइरहने शासक टाइपमा ।
हैट भन्दै मान्छे रिझाउन खप्पिस बुद्धि तामाङलाई लेखक टोलीले बुद्धि तामाङ नै नाम राखेर पुरानै बुद्धि तामाङ बनाइदिए । पौडेलजी र नेपालजी पुरानै चरित्रको फाटेको कोट लगाएर पुरानै शैलीमा डटिरहेका छन् । नायीका प्रियंका कार्की को हुन् ? कताबाट आइन् ? भन्ने प्रश्नलाई शायद लेखक ज्यु ले चिट्ठी लेखेर दर्शकका घरघरमा पु¥याइदिन्छन् होला ! चलचित्र भ्रम हो भन्ने नबुझेका दर्शकले चलचित्र हेरेपछि लोग्ने विदेशिएका श्रीमतिहरु खोज्दै गाउँ नपस्लान् भन्न सकिँदैन ।
शुरुवाति दृश्यहरु ड्रोनले खिचिनु चलचित्रको राम्रो स्ट्राटेजी हो । गीत संगीतको पाटो अच्छा छ । ट्रेलरमा देखाइएका दृश्य र बोलिएको संवाद चलचित्रमा नहुनुलाई चाहिँ दर्शक माथिको धोका नै भन्ने होला ।
जंगलमा बाइक कुदाइएको दृश्य, भट्टिमा रक्सी पिएको दृश्यको क्यामेरा एङ्गल हेर्दा निर्देशक निरौलाजी ले कबड्डी चलचित्रबाट प्रभावित भएको मान्दा फरक पर्दैन ।
संवादमा हाँस्य रस भर्न मेहनत गरेकै देखिन्छ । कतिपय क्लीसे जोकहरु पर्दामा दोहोरिँदा दर्शक केहिबेर मज्जैले हाँस्छन् । अक्सर हास्य धारमा बनेका चलचित्रहरु १५० दर्शक अट्ने हलमा केवल ४० जनामात्र बसेर हेर्दापनि दर्शक दिर्घाको हाँसोले लाग्छ दर्शक हाउसफुल छन् र चलचित्रचाहिँ सुपरडुपर हिट ।
हँसाउनु भनेको छुट पाउनु होइन । हँसाउने पनि एउटा धारमा हुन्छ । चलचित्र पत्याउनु र पत्याइदिनु फरक कुरा हुन् । यति र उती भनेर स्टारलाई रेटिङ तारा झुण्ड्याइदिनु भन्दा औंशीको आकाश नै जिम्मा लगाइदिनु वेश हुन्छ । औंशीको आकाशमा देखिने तारा गन्दा पोल खुलिहाल्छ ।
हँसाउनु आफैंमा बेजोड कला हो । आफैं नहाँस्नेहरु र फरक कोणबाट अण्डरवेयर तान्ने समिक्षकहरुलाई चलचित्र शुरु हुनु अगावै ‘स्ट्याटोटरी वार्निङ’ जस्तै गरी यस कथाका घटना र कथा काल्पनिक हुन् भनि चोखिएपनि चित्त नबुझाउने हरु बुझाउँदैनन् । तर अन्त्य होस् वा शुरुवातमा त्यस्ता समिक्षकहरु ‘स्ट्याटोटरी वार्निङ’ जस्ता होडिङ बोर्ड हाँस्दैनन् ।
अन्त्यमा, चलचित्र छक्का पञ्जा साँच्चै छक्का पन्जा नै बनेको छ । आगामि दिनमा तिर्की चौका नहोस् बरु सत्ता अट्ठाबाट बढ्दै मिस्सी बास्सा सम्म पुगोस् सुभकामना ।